ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စာမှုမြင့်တက်နေတဲ့ မြမြ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး တရားဝင်ရိုက်ကူးခွင့် ပြုလိုက်ပြီ - VPS - Shweman Online Media
ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စာမှုမြင့်တက်နေတဲ့ မြမြ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး တရားဝင်ရိုက်ကူးခွင့် ပြုလိုက်ပြီ
admin | September 11, 2019 | News | No Comments
ပရိသတ်ကြီးရေ ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းလောက်က လူမှုကွန်ယက်ပရိသတ်တွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကြား ဂယက်ထလူသိများခဲ့တဲ့ အဓမ္မပြုကျင့် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ မြမြဆိုတဲ့ မိန်းကလေးအကြောင်းကိုတော့ ပရိသတ်တွေ သိရှိပြီးလောက်ဖြစ်မှာပါနော်။
အမျိုးသားသုံးယောက်ရဲ့ အဓမ္မပြုကျင့်တာခံရပြီး သတ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့ မြမြရဲ့ အကြောင်းလေးကိုတော့ ဒါရိုက်တာညိုမင်းလွင်က ရုပ်ရှင်အဖြစ် ပြန်လည်ရိုက်ကူးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုတွေကို အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ “မြမြ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကနေ ခွင့်ပြုအကြောင်းကြားစာရရှိခဲ့ပြီး အခုဆိုရင် တရားဝင်ရိုက်ကူးခွင့်ရရှိသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်နော်။
ဒါရိုက်တာညိုမင်းလွင် ရိုက်ကူးမယ့် “မြမြ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချော သင်ဇာဝင့်ကျော်က မြမြအဖြစ် သရုပ်ဆောင်သွားမှာမို့
ပရိသတ်တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုတွေကို အများဆုံးရရှိထားပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်း အဓမ္မပြုကျင့်မယ့် လူကြမ်းသရုပ်ဆောင် ရွေးချယ်ပွဲကိုလည်း ပြုလုပ်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်နော်။
ဇာတ်ကားမရိုက်ကူးခင်ကတည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ စိတ်ဝင်တစား အားပေးဝန်းရံမှုတွေကို အပြည့်အဝရရှိထာပြီး တတ်သစ်စ အနုပညာရှင်အသစ်တွေကို အခွင့်အရေးပေးပြီး ရိုက်ကူးမယ့်ဇာတ်ကားလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
“မြမြ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒါရိုက်တာ ညိုမင်းလွင်ကလည်း ပရိသတ်တွေကို ပြောပြထားတဲ့ ဗီဒီယိုင်လေးကိုလည်း အားလုံးအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ခရက်ဒစ်လပ်ကီးမြန်မာ.
ပရိသတျကွီးရေ ပွီးခဲ့တဲ့လပိုငျးလောကျက လူမှုကှနျယကျပရိသတျတှနေဲ့ ပရိသတျတှကွေား ဂယကျထလူသိမြားခဲ့တဲ့ အဓမ်မပွုကငျြ့ သတျဖွတျခံခဲ့ရတဲ့ မွမွဆိုတဲ့ မိနျးကလေးအကွောငျးကိုတော့ ပရိသတျတှေ သိရှိပွီးလောကျဖွဈမှာပါနျော။
အမြိုးသားသုံးယောကျရဲ့ အဓမ်မပွုကငျြ့တာခံရပွီး သတျဖွတျခံလိုကျရတဲ့ မွမွရဲ့ အကွောငျးလေးကိုတော့ ဒါရိုကျတာညိုမငျးလှငျက ရုပျရှငျအဖွဈ ပွနျလညျရိုကျကူးတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။
ပရိသတျတှရေဲ့ စိတျဝငျစားမှုတှကေို အခိုငျအမာရရှိထားတဲ့ “မွမွ” ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးကိုတော့ မွနျမာနိုငျငံရုပျရှငျအစညျးအရုံးကနေ ခှငျ့ပွုအကွောငျးကွားစာရရှိခဲ့ပွီး အခုဆိုရငျ တရားဝငျရိုကျကူးခှငျ့ရရှိသှားပွီ ဖွဈပါတယျနျော။
ဒါရိုကျတာညိုမငျးလှငျ ရိုကျကူးမယျ့ “မွမွ” ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးမှာတော့ ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတျော သရုပျဆောငျမငျးသမီးခြော သငျဇာဝငျ့ကြျောက မွမွအဖွဈ သရုပျဆောငျသှားမှာမို့
ပရိသတျတှရေဲ့ စိတျဝငျစားမှုတှကေို အမြားဆုံးရရှိထားပွီး ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးကလညျး အဓမ်မပွုကငျြ့မယျ့ လူကွမျးသရုပျဆောငျ ရှေးခယျြပှဲကိုလညျး ပွုလုပျရှေးခယျြခဲ့ပွီး ဖွဈပါတယျနျော။
ဇာတျကားမရိုကျကူးခငျကတညျး ပရိသတျတှရေဲ့ စိတျဝငျတစား အားပေးဝနျးရံမှုတှကေို အပွညျ့အဝရရှိထာပွီး တတျသဈစ အနုပညာရှငျအသဈတှကေို အခှငျ့အရေးပေးပွီး ရိုကျကူးမယျ့ဇာတျကားလေးလညျး ဖွဈပါတယျ။
“မွမွ” ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးနဲ့ ပတျသကျပွီး ဒါရိုကျတာ ညိုမငျးလှငျကလညျး ပရိသတျတှကေို ပွောပွထားတဲ့ ဗီဒီယိုငျလေးကိုလညျး အားလုံးအတှကျ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။ ခရကျဒဈလပျကီးမွနျမာ.
ပုစွန်တောင်က ဒီအဘကို တွေ့ရင် သူရောင်းတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေ အားပေးလိုက်ကြပါဗျာ
“သံပရာသီးကို ရေနွေးစိမ်၍ သောက်သင့်ပါသလား ဆိုတာ” – ဆရာဦးကျော်မြင့် (တိုင်းရင်းဆေး) –
“မောင်မင်းလူကလေး” လို့ မာန်ပါပါခေါ်တက်တဲ့ သခင်ကြီးရဲ့ သက်စွန့်ဆံဖျား ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ဖြစ်စဉ်
စနစ်တကျ ထုတ်လုပ်နိုင်ပါက ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်အထိ ထိုးဖောက်နိုင်မယ့် ရိုးရာယမကာများ
ဆင်းရဲပြီး အသိပညာနည်းပါးတဲ့သူတွေကို ပစ်မှတ်ထားပြီး လိမ်နေတဲ့လူလိမ်ငွေချေးလုပ်ငန်းများ
အမေရိကန်ရေတပ်မှာ ထူးချွန်စွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးတဦး
စာသင်နေချိန်မှာ Lay ရဲ့ MV ကို ဖွင့်ပြီး ကခဲ့တဲ့ ပရော်ဖက်ဆာ ဆရာမကြီး
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်က အိုဇာခဲ့ပြီး ပြောင်းလဲသွားအောင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပုံကို ပြောပြလာတဲ့ သန္တာလှိုင်
Shweman is Myanmar’s favourite news, entertainment, lifestyle website. We provide you with the latest breaking news stories everyday.
© 2019 VPS – Shweman Online Media.